GAIA Platform စျေး - အွန်လိုင်း GAIA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GAIA Platform (GAIA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GAIA Platform (GAIA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GAIA Platform ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $598 514.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GAIA Platform တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GAIA Platform များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GAIA PlatformGAIA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0298GAIA PlatformGAIA သို့ ယူရိုEUR€0.0252GAIA PlatformGAIA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0228GAIA PlatformGAIA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0272GAIA PlatformGAIA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.27GAIA PlatformGAIA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.188GAIA PlatformGAIA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.658GAIA PlatformGAIA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.111GAIA PlatformGAIA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0396GAIA PlatformGAIA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0414GAIA PlatformGAIA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.672GAIA PlatformGAIA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.231GAIA PlatformGAIA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.158GAIA PlatformGAIA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.23GAIA PlatformGAIA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.99GAIA PlatformGAIA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0408GAIA PlatformGAIA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0448GAIA PlatformGAIA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.923GAIA PlatformGAIA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.207GAIA PlatformGAIA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.15GAIA PlatformGAIA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩35.41GAIA PlatformGAIA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦11.48GAIA PlatformGAIA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.18GAIA PlatformGAIA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.825
GAIA PlatformGAIA သို့ BitcoinBTC0.000003 GAIA PlatformGAIA သို့ EthereumETH0.00008 GAIA PlatformGAIA သို့ LitecoinLTC0.000513 GAIA PlatformGAIA သို့ DigitalCashDASH0.000341 GAIA PlatformGAIA သို့ MoneroXMR0.000338 GAIA PlatformGAIA သို့ NxtNXT2.47 GAIA PlatformGAIA သို့ Ethereum ClassicETC0.00418 GAIA PlatformGAIA သို့ DogecoinDOGE8.35 GAIA PlatformGAIA သို့ ZCashZEC0.000343 GAIA PlatformGAIA သို့ BitsharesBTS1.15 GAIA PlatformGAIA သို့ DigiByteDGB1.13 GAIA PlatformGAIA သို့ RippleXRP0.0997 GAIA PlatformGAIA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00105 GAIA PlatformGAIA သို့ PeerCoinPPC0.103 GAIA PlatformGAIA သို့ CraigsCoinCRAIG13.89 GAIA PlatformGAIA သို့ BitstakeXBS1.3 GAIA PlatformGAIA သို့ PayCoinXPY0.532 GAIA PlatformGAIA သို့ ProsperCoinPRC3.83 GAIA PlatformGAIA သို့ YbCoinYBC0.00002 GAIA PlatformGAIA သို့ DarkKushDANK9.78 GAIA PlatformGAIA သို့ GiveCoinGIVE66 GAIA PlatformGAIA သို့ KoboCoinKOBO6.73 GAIA PlatformGAIA သို့ DarkTokenDT0.0274 GAIA PlatformGAIA သို့ CETUS CoinCETI88